हावा दुर्घटनामा कसरी बाँच्न सकिन्छ? हवा दुर्घटनामा बचे
समाचार र सोसायटी, वातावरण
मान्छे को एक विशाल संख्या मर्न उड डर, डराउँछन्। तिनीहरूले संभावना एकदम यस्तो अवस्थामा सानो हुन भनेर थाह पाउँदा एक विमान दुर्घटना बच्न कसरी पढ्न। एक कार दुर्घटनामा प्राप्त गर्न मौका धेरै उच्च भयावह उचाइ र असहायपन छ हुनत। तथापि, चाहे मान्छे को प्रश्नको जवाफ एक विमान दुर्घटना बाँचे - हो। र यो उत्साहजनक छ। यसबाहेक, तिनीहरूलाई केही सबैको अरू मृत्यु जहाँ वातावरण मा बच्न व्यवस्थित। र अन्तिम तर कम्तिमा यो भयो कारण आफ्नो उचित कार्यहरू गर्न।
हावा दुर्घटनाहरु को कारण
उडान समयमा मर्न मौका धेरै कम लटरी जीत भएको छ। तैपनि, धेरै पटक एक वर्ष, एक समयमा मान्छे सयौं जीवनमा दाबी उत्पन्न दुःखद घटना। स्वाभाविक, यो पनि भने अझै पनि दुर्घटना मा बचे, डरलाग्दो छ। यस दुर्घटनामा साइट यति प्रभावशाली फोटोहरू धेरै पछि त्यहाँ अन्य विकल्प छन् भने उड गर्न इन्कार छ। तर तपाईं यो सोच्न भने, सबै एउटै विमान - परिवहन को safest मोड को एक। हो, कुनै पनि अन्य मामलामा रूपमा, त्यहाँ एक जोखिम छ। वास्तवमा, कारण केही गलत छैन पनि धेरै जान सक्नुहुन्छ।
पहिले, यो मानव कारक हो। एक दुर्लभ मामला - यो मान्छे को सहभागिता बिना उपकरण असफलता रूपमा सम्भवत कारण छ। जबकि प्रतिक्रिया समय, ध्यान, गति र निर्णय-बनाउने गुणस्तर सहित मानव क्षमताहरु, सिद्ध छैनन् सबै सुरक्षा प्रणाली, नक्कल र हरेक उडान अघि जाँच गरिन्छ। 70 त्यहाँ सिकार रूपमा केही घटना हुँदा, र तिनीहरूलाई बिना हामी मान्छे गलत कुरा गरेका बारेमा कुरा गर्दै छन्, अवस्थामा को% मा।
प्राविधिक मानव त्रुटि छैन सम्बन्धित, परिसर कारण असफल साथै लागि दोष को बाँकी 30%। एउटै श्रेणी मा सामान्यतया घटना सम्बन्धित, र यो रहस्य रहनेछ।
विमान डिजाइन ईन्जिनियर, Electricians र अन्य विशेषज्ञहरु उडान व्यक्तिहरूको सहभागिता कम गर्न काम गर्दै छन्, निरन्तर सुधार भइरहेको छ। को Interstate उड्डयन समिति, सरकारको, विमान निर्माता - प्रत्येक घटना को कारण अनुसन्धान मा दल एकदम नम्बर रुचि छ, र किनभने यो गम्भीर विचार दिइएको छ। र सिकार शायद अपवाद बिना सबै यात्रु भएकोले, आफ्नो कथा, यो स्पष्ट एक विमान दुर्घटना मा बच्न कसरी छ। वास्तवमा, यो दुर्घटना एक ठूलो उचाइ मा भयो पनि भने, एकदम सम्भव छ। र पनि अधिक त मान्छे, जमीन मा भयो कि विमान दुर्घटना को बचे थिए। त्यसैले तपाईं सुरक्षित गर्न आवश्यक?
सबै भन्दा ठूलो विमान दुर्घटना
विमान संलग्न जो सबैभन्दा भयानक त्रासदी, ठाउँ लिए कि सेप्टेम्बर 11, 2001 मा एक आतंकवादी कार्यमा छलफल। त्यो दिन मा, यो लगभग 3000 मान्छे मारे। तथापि, कडाई बोल्ने, यी catastrophes जो च्याम्पियनशिप तिनीहरूलाई पछि छैन अझै पनि छ भन्ने हो उड्डयन दुर्घटना को परिभाषा, द्वारा कवर छैन।
सबैभन्दा सिकार संख्या को मामला मा धेरै अझै पनि, मार्च 1977 मा घटित Tenerife को द्वीप, मा एक दुःखद घटना मानिन्छ जब दुई विमान बीच एक रनवे टकराव। कुल लगभग 600 मान्छे मारिए। प्राण गर्न दुर्घटना भयानक मा बचे को कथा - 12 यात्रु एक clouded मनमा बचे को संख्या को।
1985 मा, विश्व जापान मा एक प्रमुख दुर्घटना द्वारा प्रहार भएको थियो। विमान 520 सिकार परिणाम नियन्त्रण, गुमाए।
अर्को मतभेद, तर हावा मा यस समय, भारत मा नोभेम्बर 1996 मा भयो। लगभग 350 मृत।
मार्च 1974 मा, विस्फोटक decompression, पेरिस नजिकै को फलस्वरूप, विमान टर्की एयरलाइन्स दुर्घटनाग्रस्त भयो। सिकार 346 मानिसहरू थिए।
जुन 1985 मा घटित आक्रमण, को आइरिस कर्क देखि 70 किलोमिटर बोर्ड मा 329 मान्छे संग airliner मारे।
अगस्ट 1980 मा, रियाद को क्षेत्र मा बोर्ड मा आगो को फलस्वरूप 301 मान्छे को सिकार थिए।
केवल 100 भन्दा ठूलो उड्डयन दुर्घटना को इतिहास मा 30 XXI सताब्दी मा भयो। मानिसहरू दुर्घटना मा बाँचे गर्छन्? निस्सन्देह, हरेक हुनत। निस्सन्देह, सबै पछि, पनि सबैभन्दा सानो दुर्घटना, हवाई यातायात नियन्त्रक र अन्य जमीन सेवाहरूको प्रदर्शन सुधार विस्तृत छानबिन, निर्णय विमानस्थलमा सुरक्षा उपाय को बलियो बनाउँछ मा गर्न सकिन्छ जो को परिणाम, साथै विमान को डिजाइन र नयाँ व्यवस्थापन प्रणाली को परिचय सञ्चालन। त्यसैले हरेक वर्ष यो हुन्छ भने, उच्च रही छ, दुर्घटना बच्न मौका। र यसको घटना धेरै सम्भावना - सबै तल।
तपाईं दुर्घटना बच्न सक्नुहुन्छ?
यसलाई बिल्कुल असम्भव छ भन्ने विश्वास गर्छन्। 10,000 मीटर को ऊंचाई मा धेरै चिसो, कम अक्सिजन छ, र अवतरण नरम हुन असम्भाव्य छ। तर, तथ्य, साथै एक सफल नतिजा को संभावना छ कि लगभग सधैं यसो भन्दै विमान दुर्घटना को बचे को कथा।
अघिल्लो खण्डमा हामी दुर्घटना सबैभन्दा धेरै सिकार छन्, तर त्यहाँ सिकार संख्या न्यूनतम वा शून्य बराबर छ जो धेरै घटना छन्। निस्सन्देह, सबै को पहिले सामान्य मा पाइलटहरूले र चालक दल को कार्यहरू निर्भर, तर पनि आतंक सिर्जना भने र महत्वपूर्ण परिस्थितिमा शान्त रहन यात्रु आफूलाई सुरक्षित गर्न सकिन्छ।
त्यसैले, तपाईं कसरी एक विमान दुर्घटना बाँच्न गर्छन्? कसरी कार्य गर्न मा एकीकृत निर्देशन, अवस्थित छैन, तर तपाईं अझै थाहा र शुल्क र बोर्डिङ को चरण मा सिफारिसहरू केही पालना गर्न सक्नुहुन्छ। खैर, आपतकालीन अवस्था उत्पन्न गर्नुभयो भने, त्यसपछि, सम्भवत, मामला मा प्रवृत्ति, यो एक सुन्दर टाउको राख्न राम्रो छ हुनत प्रविष्ट गर्नुभयो।
को सानो घर मा safest स्थान
यसलाई केही क्षेत्रमा एक उडान समयमा विमान अरूलाई भन्दा अस्तित्व (आपतकालीन को मामला मा) को लागि थप अनुकूल छन् कि विश्वास छ। सामान्य मा, यो सत्य हो। यो पुष्टि पछिल्लो 30 वर्ष मा भयो छ कि दुर्घटना आधारित अध्ययन गर्न, साथै विमान दुर्घटना को बचे। नष्ट जहाज को फोटो पनि केही विचार गर्न जान्छ। तर पहिलो कुरा पहिले।
पहिले, निस्कनुहोस् गर्न नजिक, राम्रो - यो त छ। तपाईं आतंक र दायाँ सबै गर्न बोलिहाल्यौं छैन भने मात्र आपतकालीन वा नियमित ढोका निकटता केही परिस्थितिमा जीवन बचाउन सक्नुहुन्छ, तर। विचार आपतकालीन खोल्ने बाहिरिन्छ छ - कार्य को चालक दल, तर यो आवश्यक छ भने, के गर्न सक्नुहुन्छ र यात्री।
दोश्रो, को रियर विमान भाग सामने भन्दा सामान्यतया सुरक्षित छ। जब टाउको-मा टक्कर, रनवे भ्रमण, आगो र यति मा। डी सामान्यतया ग्रस्त पहिलो छ विमान को सानो घर र वरपरको क्षेत्र। जहाज नियंत्रण, पुच्छर र अवतरण धनुले पछि अनुपलब्ध भए। त्यसैले, केही अवस्थामा, छैन भन्दा सहज सिट छन् जीवन बचाउन सक्नुहुन्छ - यहाँ एक मौका, उडान बढी वा कम सफल पूरा 66% पुग्यो। दुर्घटना मा बचे को कथाहरू अक्सर यो पुष्टि, तर एक caveat संग - तपाईं व्यवहार गर्न आवश्यक छ।
को बचे रूस मा एक विमान दुर्घटना वा विदेश, सबै पहिले नै परिचित छन् कि nuances केही बारेमा बताउन सक्नुहुन्छ, तर तरिका सधैं बिर्सन्छन्। तिनीहरूलाई फेरि दोहोरिन हुनुपर्छ।
पहिलो, तपाईंले थप घर रही सुरु गर्न सक्नुहुन्छ - विमान मा सहज वस्त्र लगाउने, आन्दोलन प्रतिबन्ध छैन, हात सामान न्यानो केहि छ। तिनीहरूले बन्द बुरा भएकोले प्राथमिकता, कपास र ऊन गर्न दिनुपर्छ। पनि सान्त्वना जुत्ता ध्यान।
दोश्रो, तपाईं छोटो बैठक समयमा चालक सुन्न आवश्यक छ। हो, पाठ्यक्रम, एक वर्ष धेरै पटक गर्ने उड ती, यी नियमहरू पुनरावृत्ति बिना नीरस र स्पष्ट हुन थाल्छ। तर यी निर्देशनहरू उपयोगी हुन सक्छ भन्ने सोचाइ गर्न कम्तिमा एक पटक लायक छ। पनि, तिनीहरूलाई भन्दा र अधिक सुनेका गर्नेहरूले महत्वपूर्ण क्षणमा भ्रमित र आतंक बन्न सक्छ भन्दा गर्दा चालक नियमित प्रशिक्षण प्राप्त, सही व्यवहार गर्न। विमान दुर्घटना को बचे को कथाहरू उडान परिचारक सुनेर महत्वपूर्ण हो भन्ने।
तेस्रो, आफ्नो ठाउँमा बसेर, यो आवश्यक दुई कुराहरू के छ: भारी झोला माथिल्लो खण्ड राख्नु छैन, उत्पादन र अन्य बीच सिट पंक्ति गणना, र त्यो नम्बर सम्झना। धुवाँ अन्तर्गत दृश्यात्मक शून्य छ, र यो ज्ञान जीवन सुरक्षित गर्न सक्नुहुन्छ।
चौथो, बित्तिकै टोलीमा आफ्नो सीट बेल्ट कस्नु आइपुगे, यो आवश्यक त्यसो गर्न छ। प्रदर्शन बन्द गर्दा पनि, यो नै स्थिति तिनीहरूलाई छोड्न राम्रो छ। एक airliner मात्र प्रवेश भने पनि कोलाहल को एक क्षेत्र, हेडर विमान यात्रा गर्न सबैभन्दा सुखद छैन - यो लायक तपाईंको स्वास्थ्य नलिइ छ।
यो केवल आधुनिक airliner मा आफ्नो ठाँउ मा बसेर, थाहा र के गर्न आवश्यक के छ। खैर, यदि यो एक विमान दुर्घटना बच्न कसरी हुनेछ, तपाईं व्यक्तिगत अवस्था, तिनीहरूले साधारण मा धेरै छ हुनत विचार गर्नुपर्छ। निस्सन्देह, यो खतरा अचानक आउँछ भने, कार्य consciously धेरै गाह्रो छ - एक विस्फोट, टकराव, आदि तर यदि एक मौका छ, यो 100 प्रतिशत प्रयोग गर्न लायक छ ...
नियन्त्रण को विफलता र एक कठिन अवतरण
एक दुर्लभ मामला - विद्युतीय प्रणाली र अन्य उपकरण को टूटने। र एउटा सानो समस्या अझै पनि उत्पन्न र पनि यात्रु द्वारा unnoticed जाने सक्छ भने, थप गम्भीर समस्या अक्सर निकटतम विमानस्थलमा आपतकालीन अवतरण गर्न नेतृत्व। बोर्ड मा छ जो breakdowns सबैलाई को मामला मा, चालक दल निर्देशनहरू पालना गर्नुपर्छ - यो, तर, सबै कुरा क्रममा छ भन्ने होइन। यो स्थितिमा, सबै को पहिले जो कोहीले आतंक छैन सक्षम हुनेछ कि निर्भर गर्दछ। आदि कस्नु गर्न र बेल्ट कस, घाँटी स्कार्फ, सम्बन्ध, चेन हटाउन, आपतकालीन निस्कनुहोस् प्राप्त गर्न कसरी, र फेरि सोच्न .. - त्यहाँ अनपेक्षित र आकस्मिक Maneuvers, छुट्टी को उचाइ, सामान्य मा हुन सक्छ, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा तपाईं के गर्न आवश्यक छ शान्त रहनुहोस्।
यो अवतरण कठिन हुनेछ अपेक्षा गरिएको छ भने, यो अनावश्यक चोट लागेको बाट टाउको र शरीर रक्षा हुनेछ कि विशेष स्थिति सम्झन गर्न आवश्यक छ। यो कुर्सी को यात्री अगाडि पछाडि उनको हातमा नराम्ररी बस्छन र तिनीहरूलाई आफ्नो टाउको राख्दछ, सोझो स्थिति हुनुपर्छ। अर्को विकल्प - तपाईं आफूलाई नितम्ब र आफ्नो घुँडामा आराम उनको टाउको hugging, धेरै सकेसम्म मोड गर्न आवश्यक छ। यो ट्रिपोली मा लैंडिंग जब केटा परिवार सहित सय एक भन्दा बढी मान्छे, हत्या यो ज्ञान,9वर्षीया Dutchman सुरक्षित छ। यो कुरा यो कोलाहल मात्र क्षेत्र हो भने पनि, गलत छ भनेर स्पष्ट हुन्छ एक पटक, यो चोट पैदा गर्न सक्छ कि कुनै पनि तेज वस्तुहरु को pockets बाहिर लिन आवश्यक छ।
को सानो घर को Depressurization - ज्यादै बारम्बार छैन, तर निरन्तर घटना। यदि यो छैन विस्फोटक decompression, विमान परिणाम जो शाब्दिक दुर्घटना राम्रो जीवित रहन को एक मौका, अलग पतन त्यसपछि। यस मामला मा मुख्य समस्या - hypoxia। त्यस अवस्थामा मा, सानो घर अक्सिजन मास्क, को यात्री टाउको माथि स्थित र आवश्यक जब स्वतः बाहिर निकाल जुन छ। बित्तिकै तिनीहरू देखा रूपमा, तुरुन्तै तिनीहरूलाई राख्नु, केवल अनुहार विरुद्ध थिचिएको छैन। बच्चाहरु सँगसँगै गर्नेहरूलाई, यो अभिभावकको प्रवृत्ति दबाउन र पहिलो आफैलाई हेरचाह गर्न आवश्यक छ। हो, यो मामला मा यो राम्रो वयस्क चेतना अनुपलब्ध भए, यो बच्चाहरु कुनै एउटा छ मदत गर्नेछ किनभने, एक स्वस्थ अहम् देखाउने छ। तुरुन्त ऊंचाई को अचानक हानि लागि तयार हुनुपर्छ - अनुसार यसको निर्देशन संग, पाइलटहरूले सकेसम्म छिटो कम हुनेछ। बाँकी रूपमा, फेरि, शान्त रहने र सानो घर सबै निर्देशनहरू पालना गर्नुपर्छ।
यो र अघिल्लो मामला मा, एक कठिन अवतरण आगो र धुवाँ को डर पनि आवश्यक छ। यदि यो हुन्छ, पहिलो, तपाईंले तल सकेसम्म कम, कुनै पनि आपतकालीन निस्कनुहोस् आफ्नो बाटो बनाउने, भीडलाई र प्रयास जोगिन प्रयास जानैपर्छ र श्वसन प्रणाली जोगाउन र दोश्रो कुरा, खुला आगो देखि भाग्न, एक कम्बल वा बाक्लो लुगा संग कवर, र तेस्रो । 1974 मा Pago Pago मा भयो जो दुर्घटना, मा बचे को कथा, यसलाई चित्रण गर्न सजिलो छ। 97 यात्रु भाग्यमानी व्यक्तिहरूलाई को चार बचे प्रतिस्थापन मार्फत पायो गर्दा, अगाडि ढोका मार्फत यसलाई छोड्न प्रयास, चाँडै एक जल जहाज बाहिर प्राप्त गर्न सक्षम थिए।
विमान को जफती
आतंकवाद यो अवस्था लड्न सबै देशहरूको प्रयासमा धन्यवाद अत्यधिक असम्भाव्य सकिन्छ। तर यो मामला मा के थाहा राम्रो छ। द्वारा र ठूलो छ, व्यवहार कुनै पनि अन्य लिएको अस्थाइ बन्दि मा जस्तै बारेमा हुनुपर्छ - विमान मौलिक भिन्न छैन। को वर्णन आपतकालीन को कुनै पनि अन्य जस्तै, तपाईं यथासक्य सौहार्द कायम गर्न प्रयास गर्नुपर्छ। भने, अपहरण कसैले घाइते थियो समयमा, तपाईं उहाँलाई मदत, आवश्यक आफूलाई खतरा गर्न पर्दाफास छैन। यो आवश्यक छैन, चिल्ला वा ठूलो स्वरमा रोइरहेको अत्यधिक आक्रमण, outraged गर्न आतंककारीहरूले प्रकुपित छ। कुनै अचानक आन्दोलनहरु र प्रतिरोध, त्यहाँ आवश्यक सीप छैन, विशेष गरी यदि। जब एक अस्थाइ बन्दि-लिनुभएको, वार्ता लगभग तुरुन्त आफ्नो रिलीज उद्देश्य थाल्छन्। तिनीहरूले केही बिन्दुमा असफल यदि आक्रमण सुरु हुन्छ। यसरी यो अपहरणकर्ताहरूबाट टाढा राख्न आवश्यक छ, आँखा बन्द, कान, तल्ला गर्न गिरावट - र यहाँ तपाईं गर्न सक्नुहुन्छ smartest कुरा हो। विशेष प्रशिक्षित मान्छे सरल बासिन्दाहरू भन्दा धेरै राम्रो आतंककारीहरूले को neutralization सामना र सिकार पछि हामीलाई कसरी एक विमान दुर्घटना मा बाँच्न सक्षम थिए को एक न्यूनतम गर्न सकेको केही अवस्थामा। अल्ट्रासाउंड स्कैनर, एक्स-रे मेसिन, नयाँ प्रविधिहरू पनि आतंकवाद विरुद्ध लड्न मदत - विशेष कार्यक्रम एक विशेष अडिट लागि विशेष शंकास्पद यात्रु चयन गर्न मद्दत गर्न।
पहिले एक कठिन अवतरण बारेमा भने गरिएको छ भन्ने तथ्यलाई बाहेक, यस अवस्थामा, तपाईं पनि प्रत्येक सीट अन्तर्गत भण्डारण गरिएका विशेष वास्कट सम्झना गर्नुपर्छ। को चालक दल टोलीलाई वा अनुसार, यो अवतरण पानी मा भयो कि स्पष्ट भए भने, तपाईं यसलाई प्राप्त र यो धारण गर्न आवश्यक छ। कि पछि, तपाईं आपतकालीन बाहिर निकाल्छ को पखेटा मा अवस्थित छ मार्फत सानो घर छोड्न पर्छ। वरिपरि3मीटर उचाई - यो आवश्यक छैन आपतकालीन चिप्लेटी तैनाथ गरिएको छैन भने, सरल छ। यो पानी मा पहिलो आफ्नो पेट खुट्टामा ठाउँ र स्लाइड मा बनियान ल्याउन आवश्यक छ। यो सहयोगका लागि प्रतीक्षा र सार्न प्रयास पछि छ। बनियान डूब देखि बचाउँछ तर hypothermia देखि, त्यो राहत सक्दैन। 2009 मा, यो एक उपकरण मदत 13 वर्षीया को rescuers को जो लगभग 14 घण्टा लिए आगमन लागि प्रतीक्षा यात्री छ।
मान्छे - अविश्वसनीय सम्भावनाहरू एक प्राणी। चरम अवस्थामा, मान्छे को धेरै शक्ति, धीरज, बुद्धि को चमत्कार देखाउन। कसैले भर्खरै अविश्वसनीय भाग्यमानी र कसैले कारण सबै सही गरेको छ भन्ने तथ्यलाई सुरक्षित हुन्छ। मान्छे कसरी व्यवहार केही उदाहरणहरू विमान दुर्घटना को बचे त्यहाँ सुनिन्थ्यो छन्। तर यो केही उल्लेख लायक छ।
यसलाई प्रसिद्ध Vesna Vulovic, हामीलाई भन्नुहोस् सक्ने कसरी 10,000 मीटर को एक उचाइ देखि गिरावट मा एक विमान दुर्घटना मा बच्न सम्झन गर्न गाह्रो छैन। तपाईं त्यो भाग्यमानी थियो भनेर भन्न सक्छ: विमान पुच्छर मा, गिरावट सामान्य रूखहरू र अन्य यात्रु को शरीर, तर अझै पनि यो धेरै छिटो पत्ता छ जबकि दुर्घटना को समयमा त्यो चेतना हराएको, त्यसैले गम्भीर चोट लागेको र दीर्घकालीन पुनर्वास बाबजुद, त्यो सामान्य फर्कन सक्षम थियो शोकमा पछि 1.5 वर्ष पछि जीवन। तर, उनको जीवन बिताउन इच्छा र असम्भव साहस अस्वीकार गर्न।
निस्सन्देह, त्यहाँ पनि वास्तविक नायक हुन आफूलाई देखाउन रूस र सोभियत संघ मा विमान दुर्घटना को बचे थिए। यो उदाहरण - Larisa Savickaya Vulovic गर्न रेकर्ड समातेर। मान्छे एक विमान दुर्घटना मा बाँच्न कसरी उनको कथा पनि ध्यान योग्य हुनुहुन्छ। 1981 को गर्मी मा त्यो र उनको पति सिर्फ एक यात्री airliner एक सैन्य विमान संग collided गर्दा, हाम्रो सुहागरात देखि फर्के। सदस्य तत्काल मृत्यु थिए चालक दल, विमान टुक्रा घुसे र मलबे तल गिर गर्न थाले। दुर्घटना को क्षण मा Larisa एक पिन र तापमान ड्रप द्वारा जागा। यसलाई यो अवतरण नरम birchwood मा उतरा नभएसम्म, यो थियो जो समय 8 मिनेट झर्ने मलबे, लिए। केही घण्टा त्यो मानिसको शरीर अर्को फेला, अचेत र awoke रह्यो। rescuers अब बचे पाउन आशा गर्दा त्यो दुई दिन पछि फेला परेन। खैर, म केही बिन्दुमा त्यो, एपिसोड फिलिम "चमत्कारहरू अझै हुन" जसमा केटी उद्धार गरियो सम्झना त्यो यो strapped भइरहेको बिना, एक कुर्सी गर्न clung, लारिसा बुझे।
सोही, फिलिम को रील गोली हामीलाई भन्नुहोस् सक्ने कसरी एक विमान दुर्घटना बाँच्न र जंगल मार्फत मान्छे पुग्न अर्को केटी को इतिहास मा भएको थियो। 17 वर्षीया जुलियन ढक्कन पिता गर्न क्रिसमस बिदाको लागि आफ्नो आमा संग उड्यो, तर उडान सुरक्षित पूरा गर्न थियो।3किलोमिटर उचाइ संग गहिरो आफ्नो भाग बिजुली र आगोमा झर्ने पछि जंगल मा विमान दुर्घटनाग्रस्त भयो। अर्को9दिन, केटी लागि, Rainforest बारेमा ज्ञान मा चित्रकला, आफ्नो पिता देखि, मान्छे बाहिर पुग्न प्रयास प्राप्त, र त्यो सफल भयो। त्यो मात्र बाचेको व्यक्ति थियो।
त्यसैले, भन्नुभयो गरिएको छ, यो एक विमान दुर्घटना बच्न सम्भव छ कि छैन भनेर प्रश्न गर्न जवाफ, सकारात्मक छ। चमत्कारी ढंगमा उद्धार र सचेत सही कार्य मार्फत एक अनुकूल नतिजा कसरी उदाहरण धेरै छन्। त्यसैले नीरस निर्देशन बेवास्ता छैन - तिनीहरूलाई कसैको जीवन हो पछि।
एयरबेर्न रेकर्डर: यो कहाँ छ, यो कस्तो देखिन्छ? यो किन आवश्यक छ?
Leningrad क्षेत्र को प्रकृति रिजर्व
कुल्काकोव्स्की ठोस अपशिष्ट भूमिगत: समस्या र तिनीहरूको समाधान। ठोस घरेलू अपशिष्ट हटाउन
मलाई मेरो कलाईमा हरित थ्रेड किन चाहिन्छ?
रात क्लब क्लब स्टेडियम, मास्को: विवरण, ठेगाना, हॉल योजना र समीक्षा
Belobrysy एक गोरा हो
वैगनको लागि यात्रा। घोडाहरु मा घर
अभिनेत्री Irina Tarannikov: जीवनी, चलचित्रहरू र वैवाहिक स्थिति मा क्यारियर
Otitis: घर मा उपचार। घटेको, compresses, tinctures
Cheril Kuk र मात्र ककटेल 'कस्मोपलिटन' नुस्खा
दबाइ "Korglikon": प्रयोग, मूल्य, analogs र अध्ययनहरू लागि निर्देशन
लोकप्रियता र दृढता मा पुरुष शौचालय, पानी को दर्जा
कालो currant देखि जलसेक। पकाउने व्यञ्जनहरु
मित्र कसरी समकालीन वयस्क बनाउन
वजन हर्बल लागि लोकप्रिय चाय
जबकि पूरक आहार स्तनपान। तालिका - द्वारा महिना लुरे
साउदी अरबमा बिदाहरू। साउदी अरब मा आकर्षण: को विवरण
मर्मान्स्क क्षेत्र, ध्रुवीय Zori: शहर अन्वेषण